भेरिगोको साथ बस्न: एक आक्रमण प्राप्त गर्न कस्तो लाग्छ - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण कम्पनी भारी खेल खेलहरु चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> समुदाय >> गोलो र गोलो चालमा: यो के भेरिगो अनुभव जस्तै छ
गोलो र गोलो चालमा: यो के भेरिगो अनुभव जस्तै छ
के तपाइँ एक बच्चा भएको याद गर्नुहुन्छ, तपाईका बाहुलाहरू भएको फराकिलो ल्यानमा उभिरहनुभएको, र वरिपरि घुम्ने र वरिपरि घुम्ने जबसम्म तपाइँलाई माथिबाट झर्ने ठाँउ लाग्दैन? यो त्यस्तो रमाईलो अनुभव थियो। वयस्कको रूपमा त्यस्तो अनुभूति हुँदा - अझै बसिरहँदा - धेरै कम रमाइलो हुन्छ।
रगतमा चिनीको मात्रा कति सामान्य छ
गत महिनाको एक बिहान, म ओछ्यानमा उठें र मलाई लाग्यो कि म टिल्ट-ए-व्वार्ल्टमा छु। यो एक सानो विकृति थिएन कि कहिलेकाँही अचानक उठेर आउँदछ। मलाई लाग्यो कि मैले एक बोतल रक्सी खाइन। जब म बाथरूम जानको लागि उठें, तब हिंड्नको लागि म वरिपरिको पर्खाल र फर्निचरमा समात्नु पर्छ।
जब म चुपचाप बस्छु वा एकै समयको लागि एकै स्थानमा बस्छु, कताई बन्द हुन्छ। तर मेरो शरीर वा मेरो टाउको सर्ने बित्तिकै कोठा फेरि आनन्ददायी गोलमा परिणत भयो। यसबाहेक, एउटा मनोरञ्जन पार्क सवारीमा धेरै लामो समयसम्म बसेकोले पनि प्रमाणित गर्न सक्दछ, बारम्बार घुमाउने कामले गर्दा मलाई बकबक लाग्यो।
आश्रय-घर-जनादेशका कारण मेरो डाक्टरलाई मूल्या for्कनको लागि देख्न असमर्थ, मैले अनलाइन अनुसन्धान गरें र पत्ता लगाए कि मैले भर्टियाको क्लासिक मामला जस्तो देखेको छु।
भर्टिगो भनेको के हो?
भर्टिगो रोग र आफैमा रोग होईन, तर लक्षण हो। भर्टिगो स्पिनि sens्ग सनसनी वा गतिको अनुभूति हो, संस्थापक र मेडिकल निर्देशक एमडी ग्यारी लिंकोभ भन्छन् शहर अनुहारको प्लास्टिक र न्यूयोर्कको ब्रुकलिन वेटरन्स अस्पतालमा ओटोलर्याology्गोलजी / टाउको र घाँटी सर्जरीको प्रमुख।
डा। लिंकव इशारा गर्दछ कि भेरिटिगोको एपिसोडहरू सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, वा दिनसम्म पनि रहन सक्छ, र आन्तरिक कान संक्रमणको रूपमा सानो केहि कारणले गर्दा मल्टिपल स्क्लेरोसिस जत्तिकै गम्भीर हुन्छ।
धन्यबाद, भर्टिगोको अधिकतर केसहरू तुलनात्मक रूपमा हानिरहित छन्। यो सामान्यतया भित्री कानको जलनको कारणले भएको हो भन्छ विलियम बुक्सटन , एमडी, एक न्यूरोलॉजिस्ट र न्यूरोमस्कुलर र न्यूरोडाइग्नोस्टिक मेडिकेसनका निर्देशक र क्यालिफोर्नियाको सान्ता मोनिकाको प्रोविडेंस सेन्ट जोन्स स्वास्थ्य केन्द्रमा प्यासिफिक न्यूरोसाइन्स संस्थानको गिरावट रोक्न। यदि भर्टिगो केवल भित्री कानमा समस्याको कारणले हो भने, व्यक्तिहरूमा [सम्भाव्य] सुनुवाईका लक्षण बाहेक अन्य लक्षणहरू हुनुहुँदैन।
डा। बुक्सटनले एक एपिसोडको समयमा ध्यान दिएर ध्यान दिएर, र उचित निदान प्राप्त गर्ने महत्त्व औंल्याए। यो चक्करको अन्य प्रकारहरू भन्दा भिन्न हुनु आवश्यक छ, जस्तै हल्का टाउकोको महसुस (अक्सर हृदय र वास्कुलर समस्याहरूको कारण, सम्भाव्य रूपमा गम्भीर) वा वाब्ली (जुन दिमागबाट स्नायु र खुट्टाका मांसपेशिहरूमा समस्याहरूको एक विस्तृत श्रृंखलाले हुन सक्छ। , हल्का देखि गम्भीर सम्म), उनी भन्छन्। उहाँ थप्नुहुन्छ कि थप लक्षणहरू जस्तै डबल भिजन, निल्न कठिनाई, वा अचानक सन्तुलन गुम्ने जस्ता रोगका लक्षणहरू विशेष गरी यदि यी लक्षणहरू नयाँ सुरुवात हो भने, तुरुन्त मेडिकल ध्यान खोज्नुपर्नेछ किनकि ती संयोजनहरूले स्ट्रोक वा अन्य गम्भीर समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ।
दयालुपूर्वक, मेरो भेरिगो केवल आन्दोलनको सनसनीको रूपमा प्रकट भयो, र मेरो एपिसोडहरू प्रत्येक एक मिनेट भन्दा कम टिक्यो। दुर्भाग्यवस, मेरो चक्करको एपिसोड अक्सर आउँथ्यो। अधिकांश एपिसोडहरू आउँछन् र जान्छन्, डा। लिंकव भन्छन्। यो समाधान गर्न र वर्ष पछि पुन: मिलान गर्न सक्दछ।
hydroxyzine एक औषधि परीक्षण मा देखाउँछ?
भर्‍टिगो आक्रमणलाई के ट्रिगर गर्दछ? भर्टिगोलाई कसरी उपचार गरिन्छ?
भित्री कानको समस्याले गर्दा भर्टिगोका लागि त्यहाँ दुई मुख्य कारणहरू छन्। सबै भन्दा साधारण बेनिन Paroxysmal स्थितिगत भर्टिगो (BPPV) हो। डाक्टर बुक्सटन भन्छन, हाम्रो कानमा क्रिस्टलहरू छन् जुन हामी हिड्छौं जब हामी सर्छौं, हाम्रो दिमागले हामी चालिरहेका छौं भनेर बताउँदै। यी क्रिस्टल कहिलेकाँही ठाउँबाट बाहिर जान्छन् (सामान्यतया उमेर वा आघात पछि) जसले हाम्रो दिमागलाई सोच्न लगाउँछ कि हामी स्पिन गरिरह्यौं जब हामी छैनौं। यो सामान्यतया एकको शिर अर्को छेउमा वा अर्कोतिर झर्नुको साथ ट्रिगर हुन्छ।
बीपीपीभी निदान गर्न, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले केहि पनीर प्रदर्शन गर्न सक्छन् (जस्तै Dix-Hallpike परीक्षण )। यदि बीपीपीभी निदान गरियो भने, त्यहाँ अन्य चालबालाहरू छन् (जस्तै Epley युद्धाभ्यास ) जुन प्रदायकको कार्यालयमा क्रिस्टलहरू हटाउन सकिन्छ। डा। बुक्सटनले स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा नगरी घरमै यी पैतृक कार्यहरू नगर्न चेतावनी दिन्छन्। त्यहाँ केहि परिस्थितिहरू छन्, जस्तै घाँटीमा धमनी वा कंकाल समस्या, जसमा युद्द परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ। केहि केसहरूमा, तपाइँको प्रदायकले मस्तिष्क सीटी वा एमआरआई स्क्यानको साथ साथै थप उन्नत परीक्षणहरू पनि अर्डर गर्न सक्दछ कि यो निश्चित गर्न को लागी भेट्टियाको रूपमा प्रस्तुत अन्य कुनै अन्तर्निहित रोग छैन।
के तपाइँ काउन्टर मा एक नेबुलाइजर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
भर्टिगो पनि भित्री कानमा भस्टीब्युलर न्यूरोनाइटिस भनिने संक्रमणका कारण हुन सक्छ। यो संक्रमण सामान्यतया भाइरल हुन्छ र मतली र बान्ता पनि हुन सक्छ। उपचार मतली र को लागी औषधीहरुका साथ लक्षणहरु को प्रबन्धन को उद्देश्य हो meclizine , एक हल्का शामकले कताईको भावना कम गर्न मद्दत गर्दछ, डा बुक्सटन भन्छन्। हाइड्रेटेड रहन आवश्यक छ र कहिलेकाँही अन्तर्देशीय तरल पदार्थको आवश्यक पर्दछ।
कम सामान्य रूपमा, भेरिगो मेनियर रोगको कारणले हुन सक्छ, भित्री कानमा अत्यधिक तरल पदार्थ रहेको एक अराजक। भर्टिगोको साथसाथै यसले टिनिटस (कानमा बजिरहेको - सामान्यतया गुनगुनाउने वा उच्च पिच आवाजको तुलनामा गर्जन) र श्रवण क्षमता गुम्न सक्छ। मेनिएर रोगको साथ, आक्रमणहरू सामान्य रूपमा केहि दिनहरू रहन्छ र समयको साथ सुनुवाई गुम्न सक्छ। मेनिरे रोगको निदानको लागि एक चिकित्सा जाँच आवश्यक छ। उपचार नुनको सेवन घटाउनको साथ सुरु हुन्छ, र प्रायः बिरामीहरूलाई मूत्रल पदार्थ लिन आवश्यक पर्दछ।
सम्बन्धित: भर्तीगो उपचार र औषधि
यो भोलीको साथ बस्नु जस्तो के हो?
किनकि यो लक्षण हो एक अवस्था होईन, अनुभव फरक हुन सक्छ। मेरो लागि, भर्टिसो एपिसोड पहिलो हप्ताको लागि प्रत्येक टाउकोको आन्दोलनको साथ भयो र कताई सनसनी तीव्र थियो। मैले कसरी भर्टिगोसँग सामना गरें? डायमेनाहाइड्रिनेट , गति बिमारीको लागि एक औषधि, आक्रमणको गम्भीरतालाई कम गर्न मद्दत गर्‍यो, तर मलाई निन्द्रा महसुस गरायो। मैले यो पाएँ कि एकै ठाउँमा सुतिरहेकोले मलाई सबैभन्दा सहज लाग्थ्यो, तर केही बेर सीधा बसेर समयको साथ एपिसोडहरू कम भए।
महिनामा मैले पहिलो चोटि अनुभव गर्न थालेदेखि मेरो एपिसोडहरू बिस्तारै कम कम बारम्बार र गम्भीर भएका छन्। म दिनको धेरैजसो स्पिनि sens सनसनी महसुस नगरी जान सक्छु, र जब मलाई यो महसुस हुन्छ, यो हल्का हुन्छ र चाँडै बित्छ।
जबकि मँ अझै पनी मेरो कारण को कारण को लागी एक निश्चित उत्तर छैन, म खुशी छु कि यो अन्त मा बसिरहेको देखिन्छ। म लापरवाह बच्चाहरूलाई कताई छोडिदिन्छु।
एफडीएले एचटीभी रेजिमनमा प्रयोगको लागि बिकर्वीलाई अनुमोदन गर्‍यो
के यो Trulicity र metformin एक साथ लिन सुरक्षित छ?
कसरी एक दिन मा एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्न
कसरी खमीर संक्रमण को लागी नारियल तेल को उपयोग गर्न को लागी
बान्ता रोक्न म के लिन सक्छु?
मलाई कस्तो प्रकारको फ्लू छ?